သကျတနျ့ခြို: December 2012
တစ်ခါတုန်းကပေါ့ အရမ်းကိုအောင်မြင်နေတဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားဌာနတစ်ခုကနေပြီး စီးပွားရေးမှာ ထူးချွန်လို့နာမည်ကြီးနေ တဲ့ လူငယ်တစ်ဦးကို အင်တာဗျူးပါတယ် ။ အင်တာဗျုးတွေ ရဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်စကားအတိုင်း မေးတဲ့သူက လူငယ်ကို “ အောင်မြင်မှုအတွက် ဘယ်အရာက အရေးပါဆုံးလို့ ထင်ပါသလဲ ” လို့မေးခဲ့ပါတယ် ။ လူငယ်က ခဏစဉ်းစားပြီး အဖြေကို တိုက်ရိုက်မပြောပဲ သူ့ကိုပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ပြောသွားခဲ့တယ် ။
“ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ်တုန်းကပေါ့ လူငယ်တစ်ဦးက ကျောင်းပြီးတာနဲ့ နိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားပြီး အလုပ်တစ်ဖက် ကျောင်းစာတစ်ဖက်နဲ့ ပညာဆက်လက်သင်နေခဲ့တယ် ။ သူသွားတဲ့နိုင်ငံ က ပြင်သစ်နိုင်ငံတဲ့ ။ အဲဒီပြင်သစ်ကိုရောက်ပြီးမကြာခင်မှာပဲ လူငယ်လေးဟာ ပြင်သစ်က ကားဂိတ် ၊ ရထားဂိတ်တွေမှာ လက်မှတ်စစ်တွေ လက်မှတ်ပြရတဲ့နေရာမရှိကြောင်း သတိထားမိသွားတယ် ။ ကားတွေ ရထားတွေပေါ်မှာလဲ လက်မှတ်စစ်တွေလာစစ်တာ အင်မတန်နည်းကြောင်း သတိထားမိပြန်တယ် ။ တကယ်လို့ လာစစ်ခဲ့မိရင်လဲ အဖမ်းခံရမယ့် အခြေအနေဟာ လူတစ်သောင်းမှာမှ တစ်ယောက်တောင် မရှိဘူးလို့ သူတွေးမိလိုက်တယ် ။ အဲဒီလိုနဲ့ သူဟာ ကားစီးတိုင်းမှာ လက်မှတ်မ၀ယ်ပဲစီးခဲ့တယ် ။ ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ် လည်း အလုပ်လုပ်ပြီး ကျောင်းတတ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ငါဟာတတ်နိုင် သမျှ ချွေတာနိုင်သမျှ ချွေတာမယ်လို့ တွေးလိုက်တယ် ။
အဲဒီလိုနဲ့အချိန်ကာလ ၄ နှစ်ကုန်သွားခဲ့တယ် ။ နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တစ်ခုရဲ့ကျောင်းသား တစ်ဦးအဖြစ် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်တဲ့ကျောင်းသားတစ်ဦးအဖြစ် သူဟာဘွဲ့ရခဲ့တယ် ။ ပြီးတဲ့အခါ အဲဒီပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္မဏီတွေမှာ သူအလုပ်လျှောက်ခဲ့တယ် ။ သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် အလုပ်တိုင်းလိုလိုမှာ သူဟာ အပယ်ခံထိခဲ့တယ် ။ အလုပ်စလျှောက်တော့ ကုမ္ပဏီတွေက သူ့ကို ၀မ်းသာအားရကြိုဆိုကြပြီး အင်တာဗျုးတွေမေးကြပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ သူ့ကို ပယ်ပစ်ခဲ့ကြတယ် ။ ဘာအကြောင်းကြောင့် ပယ်တာလဲ ဆိုတာကိုသူလည်းအတော့်ကို သိချင်နေခဲ့တယ် ။ နောက်ဆုံး ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတော့ သူ စာပို့ပြီးအပယ်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုမေးခဲ့ပါတယ် ။ မကြာခင်မှာ ပဲ ပြန်စာ သူ့ဆီရောက်လာခဲ့တယ် ။
စာထဲမှာရေးထားတာက . . မိတ်ဆွေရဲ့ ပညာအရည်အချင်း ၊ ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးနဲ့ ထူးချွန်မှုကို ကျွန်တော် တို့ သဘောကျခဲ့တယ် ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ယုံကြည်မှု အတိုင်းအတာကို ကျွန်တော် တို့ပြန်စစ်ဆေးကြည့်တော မိတ်ဆွေဟာ လက်မှတ်မပါပဲ ကားခိုးစီးမှုအတွက် ဒါဏ်ငွေ ၃ ကြိမ်ဆောင် ခဲ့ရကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ ၀မ်းနည်းစွာ သိခဲ့ရတယ် ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာက မိတ်ဆွေဟာ
- ယုံကြည်ဖို့မထိုက်တန်တဲ့သူ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ ။ အဲဒီ ၂ ချက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေ ၀မ်းနည်းစွာ ပယ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ စာကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါ ဘွဲ့ရလူငယ်ဟာ ရုတ်တရက်အိပ်မက် ဆိုးထဲကနေ လန့်နိုးလာသလို တုန်လှုပ် ခြောက်ခြားနေခဲ့တယ် ။ စာရဲ့နောက်ဆုံး မှာလည်းအောက်ပါ အတိုင်းရေးထားပါသေးတယ် ။
“ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းရဲ့အားနည်းချက်ကို ကိုယ်ကျင့်တရားက အမြဲတမ်းလိုက်ပြီးဖြည့်ဆည်းပေးတယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကျင့်တရားရဲ့အားနည်းချက် ချို့ယွင်းမှုကိုတော့ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အသိက ဘယ်တော့မှ လိုက်မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဘူး ”
အဲဒီပြန်စာရပြီး နောက်ရက်မှာလူငယ်ဟာ သူ့နိုင်ငံသူပြန်သွားခဲ့တယ် ။ ကျွန်တော်ပြော ချင်တာ ကတော့ဒါပါပဲလို့ လူငယ်က အင်တာဗျုးမေးတဲ့သူကိုဖြေလိုက်တယ် ။
လူငယ်ရဲ့စကားအဆုံးမှာ အင်တာဗျူးတဲ့သူတွေ ခဏလောက်တိတ်ဆိတ်သွားပါတယ် ။ ပြီးတော့ထပ်မေး တယ် “ ဒါဟာ အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးပါတဲ့အချက်လို့ပြောနိုင်ပါသလား ”
“ ဟုတ်ကဲ့ပြောနိုင် ပါတယ် ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အဲဒီပုံပြင်ထဲကလူငယ်က ကျွန်တော်ဖြစ်နေခဲ့လို့ပါပဲ ကျွန်တော်ဒီနေ့အောင်မြင်လာရခြင်းဟာ မနေ့က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားတွေ အားနည်းချက်တွေကို ဒီနေ့အတွက် သင်ခန်းစာယူပြီးအကောင်းဆုံးကြိုးစားနိုင်ခဲ့လို့ပါပဲ ။
ဘယ်သူမှ မသိဘူး ဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကိုဖောက်ဖျက်လိုက်ခြင်းဟာ တကယ်တော့ ကိုယ့်အ တွင်းစိတ်ကိုကိုယ်သတ်ပစ်လိုက်ရခြင်းနဲ့တူပါတယ် ။ မနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေနောင်တတွေကို ဒီနေ့အထိ သယ်ဆောင်လာခဲ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ဖြစ်ခဲ့သမျှကို အကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာယူလို့ ဘ၀အတွက် ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုကို လက်လှမ်းယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ အသိဥာဏ်ကို မြင့်မားအောင် တည်ဆောက်ပါ ကိုယ်ကျင့်တရားကို မပျက်ယွင်းပါစေနဲ့ နိမ့်ပါးတဲ့အသိ ဥာဏ်ကို ကောင်းမွန် တဲ့ကိုယ်ကျင့်တ ရားက ကာကွယ်ဖြည့်ဆည်းပေးပါလိမ့်မယ် ။
Interview with the success man အား ခံစားဘာသာပြန်သည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 1:20 PM7comments:
The world will not end today 21st December
ဒီအကြောင်းလေးကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တုန်းကလည်း ဘလော့ဂါမှာ တဂ်ပို့စ်လေးရေးဖူးပါတယ် ။ အခု ၂၀၁၂ ရောက်လာတော့ တချို့လူတွေ့ မသိလိုက်မသိဖာသာ တချို့ကတော့ တကယ့်ကို ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေခဲ့ကြတယ် ။ ဘာသာရေးယုံကြည်မှုတွေအရရော သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာမှုတွေအရရော တချိန်ချိန်မှာတော့ ကမ္ဘာပျက်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ် ။ဘယ်လိုပျက်မလဲဆိုတာကိုလည်း ကျွန်တော် မှီသလောက်လေး လေ့လာကြည့်မိခဲ့တယ် ။ ထားပါတော့ အာကာသနဲ့တယ်လီစကုတ်ပညာရှင် တွေကတော့ မနက်ဖြန်မှာ ကမ္ဘာကြီးမပျက်ဆီးသေးဘူးဆိုတဲ့ “ The world will not end tomorrow ” ဆိုတာကို တွင်ကျယ်စွာပြောလာခဲ့ကြတယ် ။ ဒါပေမယ့် တချို့ကတော့ ကမ္ဘာပျက်မယ်ဆိုတဲ့ Count down ကိုရေတွက်နေကြတုန်းပါပဲ ။
နှစ် ငါးထောင်ကြာခဲ့ပြီဆိုတဲ့ Mayan လူမျိုးတွေရဲ့ ပြက္ခဒိန်က တကယ်တော့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့အဆုံးသတ်ကိုရည်ညွှန်းခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး ။ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ပြက္ခဒိန်တွေမှာ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့အဆုံးကို ဒီဇင်ဘာ ၃၁ နဲ့သတ်ထားသလို ဒါဟာ ကမ္ဘာကြီး ပျက်ဆီးသွားမယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ ရည်ညွှန်းခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး ။ ကမ္ဘာပျက်ဖို့ဆိုတာ ဒီနေ့သာမက နောက်ထပ် နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ လိုနေပါသေးတယ် ။ Mayan လူမျိုးတွေရဲ့ပြက္ခဒိန်ကလည်း ၂၁ ဒီဇင်ဘာမှာ ဆုံးသွားရင် နောက်ထပ်အသစ်ကို ရိုးရှင်းစွာ ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်ကနေ ပြန်စနေမှာဖြစ်ပါတယ် အကယ်၍ ဒီနေ့မှာ တကယ်ပဲ ကပ်ဆိုးကြီးတွေကျရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် ဒါဟာ Mayan တွေရဲ့ ပြက္ခဒိန်တွေကြောင့်မဟုတ်ပဲ အရင်ကတည်းကဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ၊ ပြတ်ရွေ့ကြော နဲ့ နေပတ်လမ်းကြောင်းတွေကြောင့်သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးပျက်မယ်ဆိုပြီးအတည်ပေါက် ပြောနေတဲ့သူတွေရဲ့ သက်သေပြချက်တွေကို ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါလောက်လေ့လာကြည့်သင့်ပါတယ် ။
၁ ။ Asteroid Impact (ဂြိုလ်သိမ်ဂြိုလ်မွှားတွေ လွင့်စင်ရိုက်ခတ်မှု )
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၆၅ မီလီယံလောက်တုန်းက ငှက်တွေမှလွဲ၍ ဒိုင်နိုဆောလိုမျိုး သတ္တ၀ါတွေဟာ ဒီဂြိုလ်မွှားတွေကမ္ဘာပေါ်ကို လွင့်စင်လာမှုကြောင့်သေကြေခဲ့ရ မျိုးတုန်းခဲ့ရတယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးပျက်ဆီးရလောက်အောင်တော့လည်း မဟုတ်သေးပါဘူး ။ ဒါဟာ တကယ့်ကိုရီစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့်လူတချို့စိုးရိမ်နေကြတာက အကယ်၍သာကြီးမားတဲ့ဒီဥက္ကာပျံတွေ ဂြိုလ်မွှားတွေသာ ပါကစ္စတန်သို့မဟုတ် အိန္ဒိယ လိုနူကလီးယား ပါဝါရှိတဲ့နေရာတွေမှာ ပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်စေခဲ့ရင် မမျှော်လင့်တဲ့ နူးကလီးယားစစ်ပွဲတွေက လူတွေအများကြီး သေစေနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန် နိုင်ငံ Air Force က ဂြိုလ်တုတွေကပြောခဲ့တာကတော့ ကံကောင်းထောက်မစွာပဲ ကမ္ဘာဖက်ဦးတည်နေတဲ့ ဥက္ကာပျံတွေဟာ တခြားဂြိုလ်တွေကို သာထိခိုက်စေနိုင်တယ် ကမ္ဘာကို ရောက်ဖို့တောင်နောက်ထပ် အလင်းနှစ်သန်းပေါင်းများစွာ လိုသေးတယ်လို့ဆိုထားတယ် ။
၂ ။ Gamma-Ray Burst (ဂမ်မာရောင်ခြည်ပေါက်ကွဲထွက်မှု )
ကမ္ဘာပျက်မယ်ပြောသူတွေဟာ အိုဇုန်းလွှာပါးလာတာနဲ့အမျှ ဂမ်မာရောင်ခြည်တွေပေါက်ကွဲထွက်လေထုထဲရောက်စေပြီးအောက်ဆီဂျင်ရှားပါးမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရကာ လူတွေသေကြေကြလိမ့်မယ်လို့လည်း ထပ်ပြောကြပြန်တယ် ။ ဂမ်မာရောင်ခြည်တွေပေါက်ကွဲထွက်စေနိုင်လိုက်တဲ့ ကြယ်အစုအဝေးဟာ တကယ်တော့ ကမ္ဘာ့အန္တရာယ်ဇုန်ထဲမှာရှိမနေခဲ့ပါဘူး ။ လတ်တလော လေ့လာချက်တွေအရတော့ ကြယ်တွေဟာ GRB လို့ခေါ်တဲ့အလင်းတန်းတွေထုတ်လွှတ်နိုင်ပေမယ့် အဲဒီလို ဂမ်မာရောင်ခြည်လွှတ်နိုင်တဲ့ကြယ်တွေဟာ အရမ်းကိုရှားပါးပြီး ကျွန်တော်တို့ နေစကြ၀ဌာအဖွဲ့အစည်းထဲရှိမနေခဲ့ပါဘူးတဲ့ ။ ဒါကြောင့် ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့မနက်ခင်းမှာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ပုံမှန်လည်ပတ်နေကြဦးမှာပါ ။
၃ ။ Natural Disasters ( သဘာဝကပ်ဘေးများ )
ဘယ်သူကမှ ဘယ်လို ဘဘာဝကပ်ဟာ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးပျက်စေနိုင်လိမ့်မလဲဆိုတာ မသိကြပါဘူး ။ မှန်ပါတယ် ကပ်ဘေးတွေကြောင့်ငလျှင်တွေကြောင့်မီးလောင်မှုတွေကြောင့်လူတွေအများကြီးသေနိုင်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကြီါ်ပျက်ဆီးသွားရလောက်အောင်မဟုတ်ပါဘူး ။ အခု ဆိုရင်လူတွေကြောင့်ပဲ သဘာဝ သယံဇာတတွေရှားပါးလာတယ် ပတ်ဝန်းကျင်ဂေဟစနစ်ပျက်ဆီးလာတယ် သဘာဝနဲ့လူဟာ သယဇာတမဖြစ်တဲ့အခါ ကပ်ဘေးတွေဆိုက်လာတယ် ။ ရောဂါတွေထူပြောလာတယ်။ ကမ္ဘာကြီးဟာ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၀ုန်းဒိုင်းပျက်သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ တဖြည်းဖြည်းတော့ ကမ္ဘာကြီးနဲ့အတူလူတွေလည်းတစ်နေ့တစ်နေ့မွေးလိုက်သေလိုက်နဲ့ ပျက်ဆီးနေကြတာပါပဲ ။
၄ ။ Magnetic Reversal ( သံလိုက်စက်ကွင်းပြောင်းပြန်ဖြစ်ခြင်း )
ကမ္ဘာကြီးဟာပြောင်းပြန်လည်နေတာလားအတည့်လည်နေတာလား လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၇၈၀၀၀၀ တုန်းကတော့ သံလိုက်ဝန်ရိုးစွန်း ဟာ ပြောင်းပြန်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ် ။ အခုရော အဲဒီလိုပြောင်းပြန်ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါ ကမ္ဘာကြီးဒီတစ်ရက်တည်းပျက်သွားမှာလားလို့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့မေးလာကြပြန်ပါပြီ ။ ကမ္ဘာဟာ သူ့ ရာဇ၀င်နဲ့သူ နေပတ်လမ်းထဲမှာ စနစ်တကျ သံလိုက်ဝန်ရိုးစွန်းတွေနဲ့လည်ပတ်နေလျှက်ရှိပါတယ် ။ ရှေးဟောင်းလေ့လာပညာရှင် Homo erectus က “ ကမ္ဘာဟာ သံလိုက်ဝန်ရိုးစွန်းပြောင်းလဲမှုကြောင့် လူသားတွေကို ဖျက်ဆီးနိုင်စေတယ်ဆိုရင်တောင် လူသားတွေရဲ့တည်ရှိမှု အရှိတရားကိုတော့ မခြောက်လှန့်နိုင်ပါဘူး ” လို့ ရဲဝင့်စွာပြောခဲ့တယ် ။
၅ ။ Thermonuclear War ( အပူ - နူးကလီးယား စစ်ပွဲတွေ )
ကမ္ဘာကြီးကို တစ်ရက်တည်းပျက်ဆီးစေနိုင်တဲ့အကြောင်းကတော့ အမေရိက နဲ့ရုရှားကြားမှာသာ နူးကလီးယားစစ်ပွဲတွေဖြစ်လာခဲ့ရင် ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ ဆိုကြတယ် ။ သူတို့မှာ ထောင်နဲ့သောင်းနဲ့ချီတဲ့ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဗုံးတွေရှိကြတယ် လေယာဉ်ပျံနဲ့ကျဲချနိုင်ပြီး ဆိပ်ကမ်းတွေကို ဖြိုဖျက်နိုင်တယ် ။ နူးကလီးယားစစ်ပွဲတစ်ခုဟာ လူပေါင်းသန်းနဲ့ချီပြီးတစ်နေ့တည်းမှာ သေစေနိုင်တယ် ။ စိုးတော့စိုးရီမ်သင့်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်အရမ်းကြီးတော့စိတ်ပူမနေပါနဲ့ဦး ။ အမေရိကနဲ့ ဆိုဗီယက် ယူနီယံက နူးကလီးယားစစ်ပွဲတွေကိုရှောင်ပါ့မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကိုဦးတည်နေလို့ နည်းနည်းတော့စိတ်အေးရပါတယ် ။ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ကတော့ ဘာမှမထူးခြားတဲ့ရက်တစ်ရက်အဖြစ်ကုန်ဆုံးသွားဦးမှာပါပဲ ။
နာဆာကလည်း ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းသက်သေအမျိုးမျိုးပြထားပါတယ် ။ ဒီတော့ စိတ်အေးကြယုံပါ ။ Mayan လူမျိုးတွေက ပြက္ခဒိန်တစ်ခုအသစ်လုပ်ဖို့ ပျော်ရွှင်နေကြပါပြီ ။သင်ကရော ဘာလို့ ယုံမှားသံသယတွေနဲ့ထိတ်လန့်နေမလဲ ။
Posted by သက်တန့်ချို at 1:58 PM2comments:
- ရန်ပွဲတွေ နေ့စဉ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် အိမ်အတွင်းမှာ နေသမျှ လုံခြုံမှုရှိတယ်
- စီးပွားရေးတွေပြေလည်ချင်မှပြေလည်လိမ့်မယ် တစ်ယောက်တစ်လုပ်စီ ဝေမျှစားခြင်းက နွေးထွေးခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်
- ဘယ်လောက်ပဲ အတွင်းမှာ မတည့်ကြပေမယ့် အပြင်လူနဲ့ ရန်ဖြစ်တဲ့အခါ မိသားစုဆိုတဲ့ သွေးက ပေါ်လာတတ်တယ်
- ၅၂၈ အေးမြတဲ့ မေတ္တာတွေ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ စမ်းချောင်းလေးတစ်ခု အိုအေစစ်လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်
- တခါတခါ မုန်တိုင်းတိုက်နိုင်တယ် တခါတခါ လေပြင်းတွေကျနိုင်တယ် ဒါပေမယ့် ရင်သွေးတွေကို ဘာမှ မထိခိုက်အောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးချင်တာ မိသားစုစိတ်ဓါတ်ပဲ
- မိစုံဖစုံရှိတဲ့ မိသားစု တွေစည်းလုံးပျော်ရွှင်ကြရသလို မိစုံဖစုံမရှိတဲ့ မိသားစုတွေ လည်းဝမ်းနည်းစိတ်ပျက်နေကြပါနဲ့ အနည်းဆုံးတော့ မိသားစု တော်ခွင့်ရှိနေကြသေးတယ် မိသားစု ရှိနေကြသေးတယ်
- အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနဲ့နေရတာ ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် အဲဒီတဲစုတ်လေးကလည်း နွေးထွေးလုံခြုံမှုကိုပေးစေတတ်တယ်
- အစားကောင်းအသောက်ကောင်းတွေ စားချင်မှစားရလိမ့်မယ် ဒါပေယ့် အဲဒီသုံးဦးစပ်ငါးပိရည်ကျိုနဲ့ ဘဲဥချဉ်ရည်ဟင်းက မိဘမေတ္တာကိုဖော်ပြနေလိမ့်မယ်
သင်ရော -- မိသားစုထဲက တစ်ယောက်လား
ဒါဆို သင့်မိသားစု ကို အခုပဲ နွေးထွေးစွာ ချစ်ခင်ယုယလိုက်ပါ ကြင်နာစောင့်ရှောက်လိုက်ပါ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေဟာ ဘယ်တော့မှ ပြန်ရလေ့မရှိဘူး ။
Posted by သက်တန့်ချို at 12:14 PM5comments:
Labels: ပြောချင်တာလေးတွေ, နှလုံးသားအာဟာရ
Santa Rosa De Temuco - နံနက်ခင်းတစ်ခုမှာ အိမ်တစ်အောင်မှာ မီးလောင်နေပါတယ် ။ မီးသတ်သမားတွေ လာရောက်ငြှိမ်းသတ်နေစဉ်မှာ အံ့သြဖွယ်ရာမယုံနိုင်ဖွယ်ရာအဖြစ်တွေကိုတွေ့ခဲ့ရတယ် ။ ကားဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီမီးလောင်မှုအတွင်းကို မိခင်ခွေးမကြီးက သူ့ကလေးတွေကိုကယ်ဖို့အတွက် အသက်စွန့်ပြီးပြေးဝင်သွားခဲ့တယ် ။
အေမန်ဒါလို့ခေါ်တဲ့ဒီခွေးမကြီးဟာ တဟုန်ထိုး မီးလောင်အိမ်ထဲပြေးဝင်သွားပြီး မီးတောက်တွေကြားထဲမှာ သားငယ်ကိုရှာဖွေပါတယ် ။ ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့မီးတောက်တွေရဲ့ လောင်ကျွမ်းမှုက သူ့ကိုမမှုစေခဲ့ဘူး သူ့ရဲ့ သားသမီးဇောကို မတားဆီးစေနိုင်ခဲ့ဘူး ။ ပြီးတော့ ဆယ်ရက်သားအရွယ်ရှိသေးတဲ့ သားငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါ အလျှင်အမြန်ကိုက်ချီပြီး မီးတောက်တွေထဲက တဟုန်ထိုးပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ် ။ ဟော နောက်ထပ် သူ့သားသမီးလေးတွေကျန်နေသေးတယ် သူရပ်လို့မဖြစ်သေးဘူး ။
အေမန်ဒါ နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်ဝင်သွားပြန်တယ် ဒီလိုနဲ့ သူ့ကလေးတွေ မကုန်မချင်း အထဲကိုဝင်သွားလိုက် ပြန်ထွက်လာလိုက်နဲ့ မိခင်ခွေးမရဲ့ သတ္တိတွေ မျက်ရည်ကျရလောက်အောင် ထက်မြစူးရှနေခဲ့တယ် ။ မီးသတ်သမားတွေ သူတို့မျက်စိသူတို့မယုံနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ် ။ အများစုက ဒီလောက်ရဲရင့်သတ္တိကောင်းတဲ့ခွေးကိုမမြင်ဖူးလို့ပဲဖြစ်တယ် ။
ခွေးကလေးတွေအကုန်လုံးကို အန္တရာယ်ကင်းတဲ့နေရာသယ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါ အေမန်ဒါဟာသူတို့ဘေးမှာ လှဲချလိုက်ပြီး ( လူတွေမှာဆို အရေးပေါ်အသက်ကယ်နည်း လို့ပြောလို့ရတဲ့ ) ခွေးကလေးတွေ့ကိုလျှာနဲ့ရက်ပေးခြင်း ချော့မြူခြင်းတွေကိုပြုလုပ်နေခဲ့တယ် ။ မျက်မြင်တွေ့သူတွေဟာ အရေးပေါ် တိရိစ္ဆာန်ကုသရေးတွေကို အမြန်ခေါ်ပြီး ခွေးမကြီးနဲ့ခွေးသားပေါက်ကလေးတွေကို ဆေးရုံကိုအမြန်ပို့ဆောင်ခဲ့ကြတယ် ။ ခွေးပေါက်လေးတစ်ကောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန် မီးလောင်ဒါဏ်ရာရခဲ့တာကလွဲလို့ ခွေးတွေအကုန်လုံးအသက်ရှင်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ကျေးဇူးပါတယ်တယ် ရဲရင့်တဲ့မိခင်အေမန်ဒါရေ !!!!!!!
ကမ္ဘာပေါ်မှာ သားသမီး အသက်အန္တရာယ်ကို မိမိအသက်ပေးပြီး ကယ်ဝံ့တာ မိဘတွေပဲဖြစ်တယ်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ သားသမီး ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ အမြဲအားပေးအဖော်ရှိနေပေးတတ်တာ မိဘတွေပဲဖြစ်တယ်
ကမ္ဘာပေါ်မှာသားသမီး အတွက် အရာအားလုံကို စွန့်လွှတ်စွန့်စားဝံ့သူဟာ မိဘတွေပဲဖြစ်တယ်
အချိန်ရခိုက်လေး မိဘကျေးဇူးကိုမမေ့ကြပါနဲ့ ဘ၀ဆိုတာ တိုတိုလေးပါ သေလွန်သွားမှာ နောင်တတွေရ ပန်းစည်းတွေအုတ်ဂူမှာသွားပေးနေကြမယ့်အစား မသေသေးခင် မိဘတွေဆန္ဒကိုတတ်နိုင်သလောက်ဖြည့်ဆည်းပေးကြခြင်းအားဖြင့်မိဘကျေးဇူးဆပ်နိုင်ကြပါစေ ။
Posted by သက်တန့်ချို at 12:13 PM3comments:
အဲဒီနေ့တုန်းက နှင်းတွေ ကျနေတာတဲ့ နှင်းတွေ အေးနေတဲ့ နေ့မှာ မြောက်ဥက္ကလာပ ဆေးရုံကြီးမှာ ကလေးလေးတစ်ယောက် မွေးဖွားခဲ့တယ် ။ အဲဒီကလေးလေးက မွေးတုန်းက ရုပ်အရမ်းဆိုးလွန်းတော့ သူ့မိခင်တောင်လန့်သွားတယ်ဆိုပဲ ။ ဒါပေမယ့်မိခင်မေတ္တာနဲ့ သားငယ်ကို ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တာ အသက် ၂ နှစ်ကျော်တော့ ၀၀ထွားထွားဖြူဖြူဖွေးဖွေး လေးဖြစ်လာလို့ လူတွေအားလုံးက တရုတ်ကြီးလို့ ချစ်စနိုးခေါ်ခဲ့ကြတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ကလေးလေးဟာ ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးရမယ့်အချိန်ရောက်လာခဲ့တယ် ။
အဲဒီတုန်းက သူ့မိခင်က ကလေးလေးငိုမှာစိုးလို့ဆိုပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးခံရမယ့် သားငယ်ကို ရင်မှာပိုက်ပြီး လူတွေနဲ့ ဝေးရာနေရာလေးမှာ သွားပြီးပုန်းရှောင်နေခဲ့တယ် ။ သားငယ်ငိုသံကိုမကြားရက်တဲ့မိခင်မေတ္တာကြောင့်မိုလား ကလေးငယ်ရဲ့ ရောဂါပိုးတွေကို ခုခံကာကွယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းကြောင့်လား မသိ အသက်ကြီးတဲအ့ထိ ကြီးကြီးမားမားရောဂါတော့မရှိခဲ့ဘူး ။ ဒါပေမယ့် မွေးကင်းစကနေ အသက် ၇ နှစ်လောက်ထိ ကိုယ်အပူကြီးရင် တက် တက်တဲ့ ရောဂါရှိခဲ့တယ် ။ ဒီတော့ ဆေးရုံကနေ ခါးဆီဖောက်ပြီး ရောဂါရှာရမယ်လို့ပြောတယ် ။ ခါးဆီဖောက်ရင် အောက်ပိုင်းချိတတ်တယ် ခါးဆီဖောက်ရင်အကြောဆွဲတတ်တယ် စတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက လွဲမှားနေတဲ့ ယုံတမ်းစကားတွေကြောင့် ကလေးငယ်မိခင်ရဲ့ အကိုဖြစ်သူက ကလေးကို ပိုက်ပြီး ဆေးရုံကနေ ခိုးဆင်းသွားခဲ့တယ် ။ အဲဒီကစပြီး ကလေးလေး ဘာရောဂါမှမဖြစ်တော့ပြန်ဘူး ။
မှတ်မှတ်ရရ ကလေးလေး ၁၀ နှစ်လောက်မှာပေါ့ ဖခင်ဖြစ်သူ က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောနေတုန်း သူက စားချင်တာ မစားရလို့ ဖခင်ကိုသွားပြီး ဂျီကျတယ် ။ ဒီတော့ဖခင်ဖြစ်သူက “ သား . . သွား ဟိုး မှာသွားဆော့ချေ အဖေဒီမှာ စကားပြောနေတယ် ” လို့ သတင်းစာကို လိပ်ပြီးခြောက်လိုက်တာ ကလေးငယ်က အကြောက်လွန်သတိလစ်ပြီးဆေးရုံရောက်သွားပြန်တယ် ။ အဖေဖြစ်သူက အ၇မ်းကို စိတ်ထိခိုက်သွားပြီးကလေးလေးကို အဲဒီတုန်းက ခေတ်စားနေတဲ့ ဗိုလ်အုန်းသီး စက်ဘီးကလေးဝယ်ပေးခဲ့ပြန်တယ် ။ ကလေးလေးဘ၀မှာ အသက်ကြီးတဲ့အထိ တစ်ခါက လွဲလို့ ရန်မဖြစ်ခဲ့ဘူး ။ အဲဒီတစ်ခါက မိုးရာသီကြီးမှာပေါ့ ။ ကလေးတွေ အချင်းချင်း ဂေါ်လီရိုက်ရင်း ဂေါ်လီလုကြရင်းမတော်တဆ ရန်ဖြစ်ကြတယ် ။ ကလေးငယ်လေးက သူ့သူငယ်ချင်းကို အုတ်ခဲနဲ့ ခေါင်းကို ထုလိုက်တာ ငါးချက်လောက်ချုပ်ရတယ်ပြောတယ် ။ အဲဒီတုန်းက သူ့အဖေအမေကလည်း အရမ်းးကို တောင်းပန်ရပြီး ကျေအေးဖို့မနည်းပြောယူခဲ့ရတယ် ။ အဲဒီကတည်းကစလို့ သူ ဘယ်တော့မှ ရန်မဖြစ်ခဲ့တော့ဘူး ။
သူ့ဘ၀က မချမ်းသာဘူး သူတို့စီးပွားလေးတက်လာလိုက် မီးကလောင်သွားလိုက် စီးပွားလေးတက်လာလိုက် မီးကလောင်သွားလိုက်နဲ့အခုတော့ ဒုံရင်းကဒုံရင်း အဲဒီကလေးလေးက ငယ်စဉ်ကတည်းက ဖခင်ဖြစ်သူကစည်းကမ်းတွေနဲ့ထိမ်းချုပ်ထားတယ် ။ အဖေတို့ ပညာမတတ်ခဲ့လို့ သားတို့ဆင်းရဲရတာသားတို့ကိုတော့ အဖေပညာ သင်ပေးမယ်ဆိုပြီးကျောင်းစာကိုသာဖိဖိစီးစီး လိုက်စားစေခဲ့တယ် ။သူများတွေ ဘောလုံးကန်နေတဲ့အချိန် အဲဒီကလေးငယ်ဟာ စာတွေထိုင်ကျက်နေရတယ် ။ သူများတွေ ဂိမ်းဆော့နေချိန် အဲဒီကလေးလေးဟာ သင်္ချာတွေထိုင်တွက်နေရတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ . . . .
ကလေးလေး ကိုးတန်းကျောင်းသားကြီါ်ဖြစ်လာတယ် ။ ကျူရှင်ယူဖို့မလွယ်တဲ့သူ့ဘ၀မှာ အတန်းထဲက စာတွေကသာအဓိကဖြစ်လာခဲ့တယ် ။ ဒီလိုနဲ့ ဆယ်တန်းမှာတော့ ဆရာကောင်းသမားတွေ နဲ့ဆုံပြီး သူ့ဘ၀ အလင်းရောင်စရလာတယ် ။ မှတ်မှတ်ရရအဲဒီတုန်းက ၀ူခုံးဇတ်လမ်းတွဲတွေလာတော့သူလည်းအရမ်းကြိုက်တယ် ။ ဒါပေမယ့် ငါးမိနစ်ထက်သူ့မှာ ပိုကြည့်ခွင့်မရခဲ့ဘူး သူ့အတွက်စာကသာ မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုမဟုတ်လား ။ အတန်းထဲမှာလည်း သူ့ကို ဘယ်သူကမှ အထင်မကြီးသလို သူ့အတန်းထဲကအဆင့်ကလည်း လူ ၇၅ ယောက်မှာ သူက ၇၀ လောက်ချိတ်နေတာကိုး ထားပါတော့ . . . အဲဒီလိုနဲ့ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲအောင်စာရင်းရောက်လာခဲ့တယ် ။
အောင်သွားပါတယ်... ကလေးငယ်ကလေးက အင်္ဂလိပ်စာဂုဏ်ထူးကလွဲလို့ အမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ ၄ ဘာသာ ပါတော့ မိဘတွေ မျက်ရည်တွေကျရတာပေါ့ ။ ဆေးကျောင်း . . .သူ တက်ခွင့်ရသွားတယ် ဆရာဝန်ဖြစ်သွားတယ် ဆေးတွေကုနေနေတယ် စာတွေရေးနေတယ် . . .။
သူ့ဘ၀မှာ ကောင်းတာတွေကြုံခဲ့ရသလို ဆိုးတာတွေလည်းကြုံခဲ့ရတယ်
သူ့ဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်စရာတွေကြုံခဲ့ရသလို စိတ်ညစ်စရာတွေလည်းကြုံခဲ့ရတယ်
သူ့ဘ၀မှာ အောင်မြင်တာတွေကြုံခဲ့ရသလို ဆုံးရှုံးလက်လွှတ်လိုက်ရတာတွေလည်းကြုံခဲ့ရတယ်
သူ့ဘ၀မှာ အထက်တန်းလွှာဆိုတာကိုမသိဘူး အဆင့်အတန်းဆိုတာကိုနားမလည်ဘူး သူက အကုန်လုံးကို လူတွေလို့ပဲမြင်နေတယ်
အခုတော့ သူ . . .သူ့ကိုယ်သူအားပေးနေတယ် အသက် ၂၈ ကဲ မင်းဘာဆက်လုပ်မှာလဲကလေးငယ်ရေ . . . . စာရေးဆရာဘ၀ ငယ်ငယ်က စာစီစာကုံးတွေမှာ အဖြစ်ချင်ဆုံးဘ၀ မှာသူ စာရေးဆရာလို့ထည့်ရေးတိုင်းဆရာမတွေ က သူ့လက်ထိပ်ကလေးတွေကိုခေါက်ခဲ့တယ် ။ ဆရာဝန်ကြီးအင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ချင်တယ်လို့မရေးလို့တဲ့ ။ စာရေးဆရာဖြစ်ချင်တာ သူ့အမှားလားလို့ ကလေးငယ် ခဏခဏစဉ်းစားဖူးတယ် ။ အဲဒီလိုနဲ့ သူအခု စာရေးဆရာ ပေါက်စနလေးဖြစ်လာခဲ့တယ် ။ ဒါပါပဲ ဘ၀ဆိုတာ အရှည်ကြီးသွားနေရတဲ့ခရီးမဟုတ်ဘူး တိုတိုလေးပဲမဟုတ်လား ။ ရေလိုက်ငါးလိုက် ပျော်လိုက်ရွှင်လိုက် ငိုလိုက်ရီလိုက် ၀မ်းနည်းလိုက် ၀မ်းသာလိုက် ဘ၀ ဇတ်ဆရာစေညွှန်ရာက ပြ ကြလို့ . . . တဖြည်းဖြည်းမိုင်တိုင်တွေဖြတ်ကျော်လာခဲ့ရတာ အတော်တောင်ကြာခဲ့ပြီပေါ့ ။
ကဲ ကလေးရေ . . . “ ဟက်ပီးဘတ်ဒေး ” ပါ မင်းရဲ့ တနင်္လာ ၂၄နာရီဟာ မင်းအသက်ကြီးသွားတယ်ဆိုတာပြနေတယ် မင်းဘယ်လောက်ရင့်ကျက်နေပြီလဲဆိုတာမေးနေတယ် မင်း ဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာ ဆန်းစစ်နေတယ် မင်း . . ရှေ့ဆက်ဖို့ခွန်အားတွေ ရှိရဲ့လားလုံလောက်ရဲ့လား မင်းရဲ့ဘေးမှာတော့ မင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေအများကြီးပဲကွဲ့ ကဲ ကလေးရေခေါင်းမော့ရင်ကော့လို့ လောကကြီးကို ရဲရဲသာကြည့်လိုက်စမ်း ။ ကောင်းကင်ပြင်ကြီးဘယ်လောက်လှလိုက်သလဲ မင်းရဲ့ ဒီတစ်ရက်တာဟာ တခြားနေ့တွေလိုပဲ ဘာမှမထူးခြားဘူး ဒါပေမယ့်မင်းကိုယ်မင်း အသိပေးရမယ် အချိန်တွေ မရှိတော့ဘူး အချိန်တွေပြန်ဝယ်မရတော့ဘူး မင်းကိုယ့်ကိုယ်အားရကျေနပ်မိရဲ့လား ။
“ ဟက်ပီးဘတ်ဒေးပါ ကလေးငယ်ရေ ”
ဒီလိုနဲ့ .. . ဒီတနင်္လာဟာလည်း ဘာမှထူးမခြားနားစွာ သမာရိုးကျ ပဲ တခြားနေ့တွေလို ကုန်ဆုံးကျော်ဖြတ်သွားဦးမှာပါပဲ ။
မှတ်ချက် - အထက်ပါစာထဲမှ ကလေးငယ်ဆိုသူမှာ ယခုစာရေးနေသော သက်တန့်ချိုပင်ဖြစ်သည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 10:00 AM 42 comments:
တစ်ခါတုန်းက အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သူ့အိမ်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ စားဖို့အတွက်ရယ် အရမ်းကို ဆာလောင်နေ တဲ့ ခရီးသွားတွေ စားဖို့ရယ် အတွက် ပေါင်မုန့်တွေ အမြဲဖုတ်နေခဲ့တယ် ။ အဲဒီအမျိုးသမီး ဟာ ပေါင်မုန့်အပို တစ်လုံးကို အမြဲ ပဲ ပြတင်းပေါက်တံခါးဘောင်မှာ တင်ထားခဲ့ပြီး မည်သူမဆို ဆာလောင်နေခဲ့ရင်အဝေးကို ယူသွားနိုင်အောင် စီစဉ်ထားခဲ့တယ် ။ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာ ကျောကုန်းမှာ ဘုကြီး တစ်လုံးရှိနေ တဲ့ခါး ကုန်းကြီးတစ်ယောက်က လာလာပြီး အဲဒီပေါင်မုန့် ကို အဝေးယူယူသွားလေ့ရှိတယ် ။ ကျေးဇူး တင်စကားတွေနဲ့ဖော်ပြရမယ့် အစားသူဟာ အောက်ပါစကားတွေကိုပဲ တတွတ် တွတ်ပြောနေလေ့ ရှိတယ် ။
“ သင်လုပ်ခဲ့သမျှဟာ သင့်ထံ ပြန်လာလိမ့်မယ် သင်ကောင်းတာလုပ်ရင် သင့်ဆီပြန်လာမှာပါပဲ ”
ဒီလိုနဲ့ရက်တွေ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်ကုန်ဆုံးလာခဲ့တယ် ။ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာ ခါးကုန်းကြီးက ရောက် လာပြီး ပေါင်မုန့်ကို ယူသွားတယ်ပြီးတော့ လည်းအဲဒီစကားကို ထပ်ခါထပ်ခါညည်းတွားပြောဆိုနေခဲ့တယ် ။ “ သင်လုပ်ခဲ့သမျှဟာ သင့်ထံ ပြန်လာလိမ့်မယ် သင်ကောင်းတာလုပ်ရင် သင့်ဆီပြန်လာမှာပါပဲ ”
အမျိုးသမီးဟာ စိတ်ထဲမှာ စနိုးစနောင့်ဖြစ်လာခဲ့တယ် ။ “ အတော် ယဉ်ကျေးမှုမရှိတဲ့လူ . .ကျေးဇူးတင်စကားတော့မဟုတ်လောက်ဘူး ” လို့ သူမကိုယ်ကိုယ်ညည်းတွားပြောဆိုလိုက်တယ် ။ “ နေ့တိုင်း ဒီခါးကုန်းကြီးဟာ ဒီစကားကို ပဲ ထပ်ခါထပ်ခါပြောနေတယ် သူဘာကိုဆိုလိုတာပါလိမ့် ”
ပြီးတော့ အမျိုးသမီးဟာ ဘာလုပ်တယ်ထင်ပါသလဲ ။ အမျိုးသမီးဟာ သူ့အတွက်ပြင်ဆင်ထားမယ့် ပေါင်မုန့် ထဲမှာ အဆိပ်တွေခပ်ထားခဲ့တယ် ပြီးတော့ ပြတင်းပေါက်ဘောင်ပေါ်မှာ တင်ထားခဲ့တယ် ။ သူ့လက်တွေ ကတော့ တုန်ယင်နေခဲ့ပါတယ် ။
“ ငါ ဘာတွေများလုပ်မိပါလိမ့် ” သူ့ဘာသာသူတွေးမိလိုက်တယ် ။
ရုတ်တရက်ချက်ခြင်းပဲ သူဟာ အဲဒီပေါင်မုန့်ကို ကောက်ယူပြီး မီးဖိုထဲ ပစ်ထည့်လိုက်တယ် ပြီးတော့ တခြားပေါင်မုန့်တစ်လုံးထပ်ဖုတ်ပြီး ပြတင်းပေါက်ဘောင်ပေါ်တင်ထားခဲ့တယ် ။
ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ ခါးကုန်းကြီးရောက်လာပြန်တယ် ပြီးတော့ ပေါင်မုန့်ကို ယူလိုက်ပြီး ပြောနေကျ စကားတွေကိုပြောဆိုခဲ့တယ် ။ “ သင်လုပ်ခဲ့သမျှဟာ သင့်ထံ ပြန်လာလိမ့်မယ် သင်ကောင်းတာလုပ်ရင် သင့်ဆီပြန်လာမှာပါပဲ ”
ခါးကုန်းကြီးက သူ့ခရီးသူဆက်တယ် ။ အမျိုးသမီးရဲ့စိတ်ထဲမှာ ခုနက လတ်တလောဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အပြုအမူ အဖြစ်အပျက်တွေကို သတိမမူမိပဲ ချမ်းမြေ့စွာ ရှေ့ဆက်သွားခဲ့တယ် ။ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာ အမျိုးသမီး ဟာ ပြတင်းဘောင်ပေါ်မှာ ပေါင်မုန့်ကို တင်ပေးထားခဲ့ပြီး အဝေးမှာ ရောက်နေတဲ့ သားဖြစ်သူ အတွက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့ ဆုတောင်းနေခဲ့တယ် ။ လပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါ သူဟာ သားဖြစ်သူ ရဲ့သတင်းကို မကြားရတော့ပဲ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပါတော့တယ် ။ ဒါကြောင့် သားဖြစ် သူ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစွာပြန်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းနေခဲ့တယ် ။
ညနေခင်းတစ်ခုမှာတော့ အိမ်တံခါးကို လာခေါက်သံကြားလိုက်ရတယ် ။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးက တံခါးကို ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ အရမ်းကို အံ့သြသွားခဲ့ရတယ် ။ သူဟာ သူ့သားကို တံခါးဝမှာ တွေ့လိုက်ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ သားဖြစ်သူဟာ အရွယ်ရောက်လာပြီး ပိန်ချုံးသွားပါတယ် ။ အ၀တ်အစားတွေက စုတ်ပြတ်နေပြီး တွန့်ကြေနေခဲ့တယ် ။ သားဖြစ်သူဟာ ဆာလောင်နေပုံရပြီး အားလည်းနည်းနေနေခဲ့တယ် ။
သားဖြစ်သူက အမျိုးသမီးကိုမြင်တဲ့အခါ ပြောတယ် “ အမေ ကျွန်တော်ဒီမှာရောက်နေတာ အရမ်းကို အံ့သြဖို့ကောင်းလှပါတယ် ကျွန်တော် ဒီနေရာရောက်ဖို့ တစ်မိုင်လောက်အလိုမှာ အရမ်းကို ဆာလောင်ပြီး မေ့လဲသွားခဲ့ရတယ် ကျွန်တော် သေမယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွက်လိုက်တယ် ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာပဲ အသက်ကြီးကြီးခါးကုန်းကြီးတစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့တယ် ။ ကျွန်တော်သူ့ဆီက အစာအနည်း ငယ်ကျွေးးဖို့ အသနားခံခဲ့တယ် သူက ကျွန်တော့်ကို ကြင်နာစွာနဲ့ ပေါင်မုန့်တစ်လုံးလုံးကျွေးခဲ့တယ်အမေ သူက ကျွန်တော့်အသက်ကိုကယ်လိုက်တာပါပဲ ” သူက ဆက်ပြောတယ် “ ကျွန်တော်နေ့တိုင်း ဒီကိုမလာခင်စားနေရတာတွေခါးကုန်းကြီးရဲ့စေတနာတွေပါပဲ ”
အဲဒီစကားကြားတဲ့အခါ အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာဟာ ပန်းရောင်ပြောင်းပြီးနီရဲသွားတယ် ။ သူ အမှားအကြီးကြီး လုပ်မိမလို့ လက်တစ်ကမ်းပဲ လိုတော့တယ်မဟုတ်လား ။ ခါးကုန်းကြီးရဲ့စကားကိုအမြင်ကပ်လို့ တစ်မနက် မှာပေါင်မုန့်ထဲအဆိပ်တွေ ခပ်ဖို့ ကြံစည်ခဲ့ဖူးတယ် ။ နောက်မှ အမြင်မှန်ရပြီးပေါင်မုန့်ကို မီးဖိုထဲ ပစ်ထည့်လိုက်ခြင်းဟာ အခုတော့ သူ့ရဲ့ချစ်လှစွာသောသားဖြစ်သူရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်လိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ အံ့သြတုန်လှုပ်စွာတွေးနေမိတယ် ။ အဲဒီနောက်မှာ အမျိုးသမီးဟာ ခါးကုန်းကြီးပြော တဲ့စကားအနက်အဓိပ္ပါယ်ကိုနားလည်လာခဲ့တယ် ။
သိပ်မှန်တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါပဲ ။ လူတွေဟာ သူတပါးကို မကောင်းကြံစည်ကြမယ် ကုန်းချောကြမယ် တိုက်ခိုက်ကြမယ် အနိုင်ယူကြမယ် စတဲ့ လောဘ ဒေါသ မောဟတွေ နဲ့ပူကျွမ်းလောင်မြိုက်နေလေ့ရှိကြတယ် ။ တကယ်တော့ ကိုယ်သွားလေရာကိုယ့်အရိပ်ကလိုက်ပါနေသလို ကိုယ်လုပ်နေသမျှ အလုပ်တွေရဲ့ အကျိုးအပစ်တွေကို တာဝန်ယူ ရမှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ် ။ သင်သာ သူတပါးကိုမကောင်းကြံစည်ရင် အဲဒီ ဒဏ်ကို သင် ဟာ မလွဲမသေ ပြန်ခံစားရမှာပါပဲ ။ ဘယ်သူမပြုမိမိမှုဆိုတဲ့အတိုင်း ကိုယ်ချင်းစာတရားလက်ကိုင်ထားလို့ စာနာနားလည်ခွင့်လွှတ်နိုင်ကြရင် လူသားအချင်းချင်း မနာလို မုန်းတီး စိတ်တွေမထားကြဘူးဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာလောကကြီးဟာ သာယာချမ်းမြေ့နေမှာ အမှန်ပါပဲ ။
[The Woman and the Bread] အားခံစားဘာသာပြန်သည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 3:15 PM 8 comments:
တစ်ခါတုန်းက အရမ်းကိုဆင်းရဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ဇနီးဖြစ်သူနဲ့အတူ နေထိုင်ခဲ့တယ် ။ တစ်နေ့မှာ ဇနီးဖြစ်သူက သူ့ရဲ့ ရှည်လျားတဲ့ ဆံနွယ်တွေကို ဖြီးသင်ဖို့အတွက် ဘီးလေး တစ်ချောင်း လိုချင်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တယ် ။ ယောင်္ကျားဖြစ်သူက ဘီးအသစ်တစ်ချောင်းမ၀ယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အလွန်ဝမ်းနည်းသွားပြီး မ၀ယ်ပေးနိုင်လို့ တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောခဲ့တယ် ။
သူက သူ့ရဲ့ကြိုးပျက်ဆီးနေတဲ့လက်ပတ်နာရီလေးကို ထုတ်ပြပြီး အဲဒီလက်ပတ်နာရီလေးပြင်ဖို့တောင် ငွေမရှိတဲ့အကြောင်းကို သေချာရှင်းပြခဲ့တယ် ။ အမျိုးသမီးဖြစ်သူက
ယောင်္ကျားဖြစ်သူကို ပြုံးပြီး နားလည်စွာ ကြည့်နေခဲ့တယ် ။ ပြီးတော့ယောင်္ကျားဖြစ်သူက အလုပ်ကိုသွားခဲ့တယ် အလုပ်သွားတဲ့လမ်းက နာရီ ဆိုင်တစ်ခုမှာ သူ့ရဲ့ ကြိုးပြတ်နာရီလေးကို ရတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းချခဲ့တယ် ။ ပြီးတော့ သူ့ဇနီးသည်အတွက် ဘီးလေးတစ်ချောင်းဝယ်လာခဲ့တယ် ။ သူဟာ လက်ထဲမှာ ဇနီးဖြစ်သူကို ပေးဖို့ ဘီးကလေးကိုင်ရင်း အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ် ။
အိမ်ရှေ့ရောက်တဲ့အခါ ဇနီးဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီး သူဟာ အရမ်းကို တုန်လှုပ်အံ့သြသွားခဲ့ရတယ် ။ ဇနီးဖြစ်သူဟာ ဦးခေါင်းထက်က ဆံပင်အရှည်ကြီးကို တိုတိုလေးညှပ်ထားတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ် ။ သူမဟာ ဆံပင်အရှည်ကြီးကိုဖြတ်ရောင်းပြီး ရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ ယောင်္ကျားဖြစ်သူအတွက် လက်ပတ်နာရီကြိုးလှလှလေးတစ်ခုဝယ်ပေးထားခဲ့တယ် ။
နှစ်ဦးစလုံးရဲ့မျက်ဝန်းတွေကနေ မျက်ရည်တွေ စီးကျလာခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့လုပ်ရပ်တွေအတွက် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ၀မ်းနည်းလို့မဟုတ်ပေမယ့် သူတို့တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးထားရှိတဲ့ အချစ်တွေကို အချင်းချင်းနားလည်သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်
ချစ်တယ်ဆိုတာက မခက်ခဲပါဘူး တကယ်ချစ်တတ်ဖို့ တကယ့်ကိုချစ်မိသွားဖို့ဆိုတာကတော့ စိတ်ထဲကနှစ်နှစ်ကာကာ ရင်ခုန်သံတွေနဲ့ သီဖွဲ့ထားဖို့လိုပါတယ် သင်ရော သူ့ကို တကယ်ချစ်ပါသလား . . . ဘယ်တော့ မှ သူမျက်ရည်ကျအောင်မလုပ်မိပါစေနဲ့ ဘယ်တော့မှ သူ့ကို အဝေးထွက်သွားခွင့်မပေးပါနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းအားဖြင့် သူ့ကို နွေးထွေးစွာ ပွေ့ဖက်ထားလိုက်ပါ ။
the beauty of love.. အားခံစားဘာသာပြန်သည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 3:07 PM4comments:
Facebook ပျေါမှ စာစုမြား (55)
Facebook ပေါ်မှ စာစုများ (241)
Public Awareness (48)
သော့ကလေးမြား ၂ (2)
သော့ကလေးများ ၂ (10)